FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG : Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana
Nitondra fanazavana mahakasika ilay raharaha volamena 73,5 kg koa ny teo anivon’ny Fadintseranana malagasy, omaly, nandritra ny tafa ho an’ny mpanao gazety nataon’izy ireo. 13 janvier 2021
Raha ny fanazavana, tsy nahazo fampandrenesana koa izy ireo nialoha ny niaingan’ny sidina manokana tao Ivato sy nandritra ny fahatongavany tany Toliara. Raha ny tokony ho izy anefa, tsy maintsy mahazo fanambaràna mialoha ny fadintseranana 24 ora mialoha ny hahatongavan’ny fiaramanidina na sambo iray. Voalaza kosa fa ny 31 Desambra 2020, tamin’ny roa ora folakandro no efa niantso ny teo anivon’ny Fadintseranana ny manam-pahefana tatsy Afrika Atsimo.
Izany hoe efa tonga tany an-toerana ny fiaramanidina avy eto Madagasikara. Nilaza ireo manam-pahefana ireo tamin’ izay fa misy volamena hankany Adis Abeba ary hiondrana any Dobay. Ireo volamena ireo dia niainga avy eto Madagasikara, nandeha tamin’ny sidina manokana saingy ny antontan-taratasy nitondrana azy dia voalaza fa avy any Mali, an’ny orinasa iray natao hoe : SGM na (Sky Gold Mali). Niala teto Antananarivo tamin’ny dimy maraina, nandalo Toliara ary nihazo an’i Afrika Atsimo io fiaramanidina manokana io, raha ny fanazavana saingy tsy nisy fampahafantarana natao teto anivon’ny Fadintseranana. Nanamafy ny fiarovan-tenany, araka izany, ny teo anivon’ny Fadintseranana ary nilaza fa tsy tompon’ antoka tamin’ny fivoahan’ireo volamena teto Madagasikara.
“Tsy nampandrenesin’ny sampana miandraikitra ny fanadihadiana mialoha izahay”, hoy ny Tale jeneralin’ny Fadintseranana, Lainkana Zafivanona Ernest. Nanantitra kosa ny Fadintseranana anefa fa ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity dia tsy mijanona eto Madagasikara irery ihany. “Iarahana amin’ny manam-pahefana atsy Afrika Atsimo sy any Mali io raharaha io satria misy ifandraisana ireo rehetra ireo”, hoy ny fanazavana.
Efa nisy kosa ny fanadihadiana anatiny nataon’ny Fadintseranana niaraka tamin’ny Minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Zandarimariam-pirenena. Nanamafy ihany koa ny Fadintseranana fa tsy avy any Mali izany ireo volamena ireo fa avy eto Madagasikara, araka ny fanadihadiana natao. Ny taratasy hosoka nitondran’ireto mpanao trafika ireto ny entana dia nilaza fa ny seranam-piaramanidina ao Bamaco-Modibo-Sénou no nivoahan’ireto entana ireto ary ny SGM no tompon’entana nanondrana azy. Nosoratana tao anatin’io koa ny volamena 73,5kg. Io taratasy io dia notsorin’ny teo anivon’ny Fadintseranana malagasy avy hatrany fa hosoka ary tsy marina.
Nanazava ny Talen’ny Fadintseranana malagasy fa ny fanambaràn’ny Fadintseranana dia iraisan’ny Fadintseranana rehetra eran’izao tontolo izao ho an’ny Firenena mifanerasera ka tsy mila adika amin’ny teny hafa intsony (ity fanambaràna hosoka ity dia nadika tamin’ny teny anglisy). Novan’ireo mpanao trafika koa ny fanambaràna tao anatin’ity taratasy hosoka nitondrana ny volamena ity. “Tokony hisy laharana ny fanambaràn’ny fadintseranana fa ny fanambaràna nataon’ireo mpanao trafika dia tsy nisy”, hoy ny fanazavana. Nanantitra koa ny Tale miandraikitra ny lafiny lalàna sy ny hosoka eo anivon’ny Fadintseranana, Volasoa Razafitrimo fa betsaka ny karazana fandikan-dalàna aterak’ity tranga ity.
Ho an’ny Fadintseranana manokana dia ny fandikana ny fitsipika mifehy ny Fadintseranana mihitsy no voahitsakitsaka, indrindra amin’ny trafika avo lenta tahaka izao. Ireto fisafotofotoana misy amin’ny samy tompon’andraikitra ireto no manambara fa “mafia” sy mpanao trafika avo lenta ny ao ambadik’ity raharaha ity. Tsy andraikitry ny Fitondram-panjakana irery intsony koa ity resaka ity fa satria efa misandrahaka maneran-tany ilay tambajotra. Na izany aza, nijoro hatrany ny Fitondrana ankehitriny ary manao ny ezaka rehetra hamerenana io harem-pirenena io eto an-toerana.